Mareykanka oo Turkiga ugu baaqay hakinta weerarka ka dhanka ah Kurdiyiinta Suuriya - BBC Somali
Mareykanka oo Turkiga ugu baaqay hakinta weerarka ka dhanka ah Kurdiyiinta Suuriya
Image caption Mareykanka waxa uu doonayaa in Turkiga uu hakiyo duqeymaha ka dhanka ah Kurdiyiinta Suuriya.
Mareykanka ayaa ugu baaqay Turkiga in uu hakiyo weerarada ka dhanka ah maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ku sugan woqooyiga dalka Suuriya.
Afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda oo lagu magacaabo John Kirby ayaa sheegay in mareykanka uu sidoo kale ugu baaqay maleeshiyaadkaasi kurdiyiinta ee Suuriya iyo xulufadooda in aysan qabsan dhul hor leh inta lagu guda jiro waxa ay waaxdu ku tilmaantay xaaladda jahawareersan.
John Kirby ayaa intaasi ku daray in ay habboon tahay in Turkiga iyo Kurdiyiinta Suuriya ay diiradda saaraan sidii wax looga qaban lahaa mintidiinta kooxda khilaafada islaamka.
Kal hore, ayaa ra’iisal wasaaraha Turkiga Ahmet Davutoglu waxa uu xaqiijiyay in milatariga dalkiisa ay duqeeyeen saldhigyada Kurdiyiinta ee ku yaal Woqooyiga Suuriya.
Goobaha la bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah xerada ciidamada cirka ee khamiistii ay qabsadeen xoogagga Kurdiyiinta ee YPG oo Turkigu uu sheegay in ay xiriir la leeyihiin mintidiinta Kurdiga ee PKK ee dagaalka kula jira ciidamada ammaanka ee dalka Turkiga.